एसीसी यू-१९ एसिया कपः नेपालद्वारा बंगलादेशलाई २६२ रनको लक्ष्य | Kendrabindu Nepal Online News
31160133 963977 7436069 22760087
एसीसी यू-१९ एसिया कपः नेपालद्वारा बंगलादेशलाई २६२ रनको लक्ष्य
२२ भाद्र २०७६, आईतवार १४:००
काठमाडौं । एसीसी यू-१९ एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले बंगलादेशलाई २६२ रनको लक्ष्य दिएको छ । श्रीलंकाको पी सारामा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै २६१ रन बनायो । नेपालका लागि पवन शरार्फसँगै सन्दीप जोराको ब्याटिङ उत्कृष्ट रहृयो ।
ऋत गौतम र पवनले पहिलो विकेटका लागि ४५ रनको साझेदारी गरे । ऋत ३२ रनमा आउट भए । आसिफ शेख मात्र ३ रनमा पभेलियन फर्किए ।
पवनले सम्हालिएर ब्याटिङ गरे । उनले कुशल मल्लसँग ३९ रनको साझेदारी गरे भने कप्तान रोहितकुमार पौडेलसँग १४ रनको साझेदारी गरे । त्यसपछि सन्दीप जोरासँग १४ रनको साझेदारी गरेका उनी ८१ रनमा आउट भए ।
पाँचौं विकेटका रुपमा पवन आउट भए । सन्दीप जोराले भीम सार्कीसँग मिलेर ७१ रनको साझेजारी गरे । सन्दीपले ३७ बलमा ५६ रन बनाए । भने भीमले २१ रन बनाए । कुशल मल्लले व्यक्तिगत २८ र कप्तान रोहितकुमारको नाममा १४ रन रहृयो ।
बंगलादेशका मोहम्मद तान्जिम हुसेन र मोहम्मद शाहिन आलमले समान २-२ विकेट लिए । सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई यथावत राख्न नेपालले यो खेल जित्नै पर्ने हुन्छ ।
यदि पराजित भएमा नेपाल एक खेल अगाडि नै यू-१९ एसिया कप क्रिकेटको समूह चरणबाटै बाहिरिनेछ । नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलंकासँग ५ विकेटले पराजित भएको थियो ।
u19 cricket, एसीसी यू -१९ एसिया कप
Prevकसले गर्दैछ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बदनाम गराउने प्रयास ?
गुलाबी उमेर : कहिले आउँछौ त फेरि ? – ‘मेरो जीवनको बाटो एकतर्फी छ’Next
यू–१९ एसिया कपः दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित, खेलबाट बाहिरियो
एसीसी यू -१९ एसिया कप : आज नेपाल र बंगलादेशबीच खेल हुने
दोस्रो जीतका ४ तस्बिर
नेपालद्वारा मलेसिया पाँच विकेटले पराजित